Isithunywa SikaZuma Sihlangana LoMugabe, uTsvangirai LoMutambara
UMongameli weleSouth Africa uMnu Jacob Zuma ongumlamulankunzi kudaba lweZimbabwe sethumele isithunywa sakhe eHarare uMnu Mac Maharaj ukuyakhulumisana labakhokheli bamabandla akuhulumende womanyano.
UMnu Maharaj ufike elizweni ngoMvulo watshona ehlangana loMongameli Robert Mugabe, uMnu Morgan Tsvangirai loMnu Arthur Mutambara, munye ngamunye bekhuluma ngokuhluphayo kuhulumende womanayano okugoqela ukungafezwa kwesivumelwano seGlobal Political Agreement.
Yena uMongameli Zuma ngokwakhe ubikwa elakho ukuya eHarare kumalanga alandelayo ukuyazama ukuqeda ukudonselana okukhona phakathi kweZanu PF leMDC phezu kokwabelana umbuso.
UZuma ubikwa njalo elungiselela umhlangano weSadc okhona ngenyanga ezayo eNamibia lapho akhangelelwe ukwazisa inkokheli yeSadc ukuthi imizamo yakhe yokulungisisa udaba lweZimbabwe sifike kuliphi ibanga.
Kusenzakala lokhu, iMDC leZanu PF zikhanya sezilungiselela ukhetho olulakho okwenziwa ngomnyaka ozayo. I Zanu PF ihlezi ikhuthaza abasekeli bayo ukubana bahlale belindele ukhetho, okuyinto ephuma emlonyeni weMDC.
Sibuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe esebenza lenhlanganiso yeUnion for Sustainable Democracy uMnu Bhekilizwe Ndlovu ukuthi kambe ilizwe lilulungele na ukhetho okwamanje.